Diplaomasia Te hanamafy hatrany ny fiaraha miasa ireo firenena vahiny
Noho izao fahatrarana ny faha-60 taonan` ny fahaleovantena izao dia maro ireo firenena nandefa hafatra ho fiarahabana ny vahoaka Malagasy.
Nandefa taratasy ny masoivohon` i Korea Atsimo, monina sy miasa eto Madagasikara. Ankoatra izay, dia nambarany fa manohana ny vahoaka Malagasy amin`izao ahamehana ara-pahasalamana izao i Korea Atrsimo. Nanolotra fitaovana fitiliana moa ity firenena iadiana amin` ny COVID-19 toy ny “kit de depistage” ho an`ny laboratoara HJRA sy LA2M. Anisan` ny nandefa taratasy ho an` ny Filoha Rajoelina sy ny vahoaka Malagasy ihany koa ny filoha indianina, Ram Nath Kovind. Nambarany tao anaty hafatra fa mankasitraka ny fiaraha miasa amin`i Madagasikara i Inde, fiaraha-miasa izay mifototra amin` ny fametrahana fandrosoana sy fandriampahalemana ao anatin` ny faritry ny ranomasimbe indianina ary maniry hanamafisana hatrany ny fiaraha-miasa eo amin`ny firenena roa tonta. Anisan` ireo nandefa taratasy ho an`ny filoha Rajoelina amin` ny fahatrarana ny 60 niverenan` ny fahaleovantena izay nankalazaina ny 26 jona lasa teo I Guinnée Bissau, Cameroun, Suisse ary ny sekretera jeneralin` ny OIF (Organisation Internationale de la Francophonie).